Kaalinta qurbajoogta soomaaliyeed iyo horumarinta dalka. SomaliaDiaspora | Somali - Diaspora
SomaliaDiaspora – Kolkii ay waddan dhibaato lasoo gudboonaato, ha ahaato mid dabiici ah ama mid ay dadku sabbabeen, waxaa inta badan dhacda in dad badani ka qaxaan dalkaas oo wadamo kale aadaan. Sida ay muujiyeen baaritaano kala duwan waxaa ugu horeyn qaxa dadka dhaqaalaha haysta iyo dadka aqoonta leh. Labadaan kooxood ayaa ah kuwo saameyn weyn bulshada ku leh. Sidaas darteed bulshadu waa dareentaa maqnaanshahooda. Dalka soomaaliya waxaa uu dagaal iyo khilaaf siyaasadeed ku sugnaa muddo ku dhow 30 sano. Taasina waxaa ay dhalisay in dad badan oo ah kaalin muhiim ah bulshada ku leh ay qaxaan oo noqdaan kuwo qurbaha ku nool. Haddaba qormadaan waxaan ku eegi doonaa siyaabaha kala duwan ee ay qurbajoogta soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan horumarinta wadankii hooyo.